नेपाली डायस्पोरा र राष्ट्रियताको सवाल « Postpati – News For All
बिष्णु भुजेल पढ्न लाग्ने समय : ९ मिनेट
बिष्णु भुजेल ।
२ नोभेम्वर २०१९ मा भारतले नेपाली भूमी लिम्पीयाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो राजनैतिक नक्शामा सामेल गरेर सार्वजनिक गरेको छ । यो अतिक्रमणकारी हर्कतको विरोधमा फेरी एक पटक नेपाली जनता जुरुक्क उठेका छन् । भारतीय हस्तक्षेपको विरोधमा नेपालमा मात्र नभएर प्रवासमा रहेका नेपालीहरुले पनि संगठित रुपमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
नेपाल माथि भारतीय सत्ताधारीहरुको ज्यादती कति छ भन्ने कुराको उजागर गर्न यी विरोधका कार्यक्रमहरुले भूमिका खेलिरहेका छन् । प्रवासमा थुप्रै देशहरुमा भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन भैसकेका छन । यो प्रदर्शनको शुरुवात बेल्जियममा रहेका नेपाली डायस्पोराबाट गरिएको हो । नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा, बेल्जियमले भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्नको लागि सवै प्रकृया अगाडि बढाए संगै बेल्जियमस्थित सबै नेपाली संघसंस्थालाई पनि यो प्रकृयामा सहभागी हुन अपिल गऱ्यो र त्यसमा सबैको उत्साहजनक सहभागिता रह्यो ।
त्यतिबेला नै नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चाले (एनपीपीएफ) भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने र यो बिषय सुगौली सन्धी देखि हालसम्मका नेपालका सत्ताधारीहरुको सारमा रहेको दलाल चरित्र नै प्रमूख कारण भएकाले यो विषयमा नेपाल सरकारलाई पनि दबाव दिनु पर्दछ भनेको थियो । यो विषयलाई बुझ्ने र प्रस्तुत हुने सवालमा एनआरएनए (ग्लोवल) र एनपीपीएफ बीच अन्तरविरोध रहेको छ । एनआरएनएको प्रस्तुती र वक्तब्यबाजी हेर्दा लाग्छ, यो संस्था नेपाल सरकारको कुनै एक औपचारिक निकाय हो र यसले नेपाल सरकारको हरेक कदममा प्रतिबद्धता जनाउन पर्दछ । एनआरएनएको बुझाईमा पूर्वाग्रही र गलत हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनमा सहभागी हुन्छ भने लचकता अपनाउंदै संगै जानु पर्छ भन्ने हेतुले हामी बेल्जियममा भएका सबै संघ संस्था एउटै मंचमा प्रस्तुत भएका थियौं ।
यहाँं मैले दोहोरो नागरिकता लिनु राम्रो कुरा हो भन्न खोजेको होइन । तर दोहोरो नागरिकता लिने बिषय देशको हित अनुकूल छ, त्यसको सकरात्मक उपयोग भइरहेको छ र नागरिकता खोस्दा नागरिकहरुलाई नै समस्या पर्छ भने सरकारले सस्तो लोकप्रियता कमाउने निर्णयबाट पछि हट्नु पर्छ । विकसित देशहरुमा कसलाई नागरिकता दिने वा नदिने भन्ने बिषय व्यक्तिगत मूल्यांकनका आधारमा गरिन्छ । विदेशी मूलको नागरिकले गम्भीर प्रकृतिको अपराध गरेको अवस्थामा मात्र उसको नागरिकता खोसेर जन्मेको देशमा पठाइन्छ । नेपालमा जन्मे हुर्केका, अवसरका लागि विदेश आएका तर नेपालकै सेवा गरिरहेका व्यक्तिहरुको नागरिकता खोस्न मिल्दैन । नेपालमा नरहेपनि एक नेपाली नागरिकले गर्नुपर्ने भूमिका उसले निर्वाह गरिरहेको हुन सक्छ । बरु उसलाई नेपाली नागरिक निरन्तर भइराख्न के प्रावधान चाहिन्छ, त्यो निर्धारण गर्न सकिन्छ । निश्चित कर तिर्न पर्ने, निश्चित अवधिमा नेपाल आईरहन पर्ने, नेपालको अहितमा काम गरेको छ छैन जाँच गर्ने आदि । अहिले नेपालको संसदीय निर्वाचन प्रणाली साह्रै नै फोहोरी र भद्दा भएकाले सबैलाई शंका लाग्नु स्वभाविकै हो । मताधिकार र जनप्रतिनिधीको रुपमा निर्वाचनमा उठ्न पाउने अधिकार नेपालको भूराजनितीले के कति धान्न सक्छ? त्यसको वैज्ञानिक बहस र छलफल गर्न सकिन्छ । तर पनि कथंकदाचित प्रवासमा रहेको नेपालीले नेपालमा निर्वाचित प्रतिनिधि बन्ने अवसर प्राप्त गर्ने हो भने निश्चय नै आफ्नो ज्ञान र सीपलाई सही प्रयोग गर्दै अब्बल दर्जाको समाज सुधारका काम गर्न सक्छ ।
प्रवासी नेपालीहरुका यस्ता गम्भीर विषयहरुमा आवाज उठाउन छोडेर एनआरएनए ग्लोवल सरकारको चाकडीमा लिप्त हुनु भनेको संस्था नै विघटनको संघारमा उभिनु हो । यसमा चर्चा गर्न खोजिएको विषय भने भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध अहिले एनआरएनए ग्लोवलले चलाएको अभियान एक कदम प्रगतिशील हुंदाहुुंदै पनि वर्तमान नेपाल सरकारले सबै कुराको हल गर्छ र सरकारको विरुद्धमा बोल्न हुन्न भन्ने कुरा गलत छ । यो हस्तक्षेप विल्कुल नयां र नौलो होइन । यो शदियौं देखि हुंदै आएको कुरा हो । नौलो के हो भने, अहिले भारतले अतिक्रमित भूभागलाई आफ्नो नक्शामा समेटेर प्रकाशित गरेको छ । त्यो भूभागमा भारतीय सेना धेरै पहिले देखि नै छ । त्यो क्षेत्रमा भारतीय सेना राखेपछि हाम्रा देशका कति राष्ट्रप्रमुखहरु भारत गए होलान्, कति आए होलान्, छलफल र वार्ताहरु भए होलान् तर विडम्बना के भो भने नेपालमा हरेक नयाँं सरकार बन्दा भारतले झन नयाँ खाले हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको छ र नेपाल सरकारले त्यसको विरोध होइन कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ । त्यसैले भारतीय हस्तक्षेपलाई नेपाल सरकारले नै निमन्त्रणा दिइरहेको छ ।
आफ्नो भूभागमा, देशको सहमतिविना विदेशी सेना बर्दीमा प्रवेश गर्न पनि पाउंदैन तर भारतीय सेना वर्षौदेखि ब्यारेक बनाएर बसिरहेको छ भने अब त्यसलाई हल गर्न कुन कुटनैतिक काम बाँकी रह्यो ? अनि सरकारले गरिहाल्छ भनेर कसरी हामी ढुक्क भएर बस्ने ? त्यसैमा पनि नेपाल सरकारले केही पहल गरेकै छैन । नेपाल सरकारले आफ्ना दलाल तथा आत्मसमर्पणवादी चरित्रलाई परिवर्तन गर्ने हो भने करोडौं नेपाली जनता सिमामा लड्न समेत तयार छ । लडाइं हतियारले मात्र जितिने कुरा होइन यो त जनताको समर्थनमा भर पर्ने कुरा हो । यस्तो अवस्थामा नेपालले राष्ट्रिय स्वाधिनताको लडाइं समेत घोषणा गर्न पर्ने हुन्छ । तर त्यो परिस्थिती भन्दा पहिले नेपालले यो विषयलाई अन्तर्रराष्ट्रियकरण गर्नु पर्दछ । कमसेकम अन्तरराष्ट्रियकरण हुन सक्यो भने भारतीय ज्यादति विश्वसामु उदाङ्गो हुन्छ । सरकारको पारा हेर्दा खेरी यसलाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्ने कुनै संकेत देखिदैन । त्यसैले यो मुद्दालाई जस्ले अन्तर्रराष्ट्रियकरण गर्न नेपालमा संघर्ष गरिरखेका छन उनिहरुलाई नेपाल सरकारले ब्यापक दमन धरपकड गरेको छ । जसले यो विषयलाई निरन्तर उठाएको छ उसलाई अन्यायपूर्ण तवरले प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसर्थ यो विषयलाई सम्पूर्ण एनआरएनएहरुले सरकारलाई दबाव दिने र यो विषयवस्तुलाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्नको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन ।
३० मंसिर २०७६, सोमबार को दिन प्रकाशित